Mmekọrịta Ihe niile na gam akporo ekwentị na Mac
Mmekọrịta Ihe niile na android ekwentị na Mac
Dị nwetara ihe Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na ugbu a chọrọ ka mmekọrịta Android na Mac maka gị chọrọ music, video, photos, .etc? On Windows PC, ihe niile bụ otú ọrụ enyi na enyi na i nwere ike mmekọrịta Android na Mac nanị site arịọnụ gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na eriri USB. Otú ọ dị, ihe dị iche iche mgbe abịa Mac. Mac bụ enweghị ike ịchọpụta Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ka naanị mmekọrịta Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na Mac.
1. shortcut: mmekọrịta Android na Mac iji nweta ihe niile
2. Mmekọrịta Files Otu na otu n'etiti akporo ekwentị na Mac
2.1 mmekọrịta Android Ndi ana-akpo na Mac site Iji Mac Akwụkwọ Adreèsị
2.2 mmekọrịta Android Music / Video na Mac site Iji doubleTwist
Ma gụọ 2.3 mmekọrịta Mac Kalinda na Android site Iji iCal
2.4 mmekọrịta Android Photos na Mac site Iji Dropbox
2.5 mmekọrịta Android Documents na Mac site Iji Android File Nyefee
2.6 mmekọrịta Android Ibe edokwubara na Mac site Iji Google Akaụntụ
Ka m banyere n'elu, Mac apụghị ịchọpụta gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. N'ihi ya, ka mmekọrịta ihe niile n'etiti Android na Mac, i kwesịrị isere nkwado si a ọzọ ngwá ọrụ. Ebe a bụ ihe dị mfe na-eji Android mmekọrịta maka Mac ngwá ọrụ aha ya bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-enyere gị ka mmekọrịta iTunes n'ọbá akwụkwọ ka Android on Mac, na mmekọrịta music, video, foto na dọkụmentị si Mac ka Android effortlessly.
A ọkachamara iTunes maka Android ngwá ọrụ iji nyere nyefee iTunes n'ọbá akwụkwọ gaa Android effortlessly, na Anglịkan.
Mmekọrịta music, video, foto na dọkụmentị si Mac ka Android site Ịdọrọ na idobe
Dọrọ na dobe music, listi ọkpụkpọ, pọdkastị, TV na-egosi na ndị ọzọ si iTunes ka Android ekwentị mfe.
Otu pịa ka mmekọrịta iTunes n'ọbá akwụkwọ gaa Android, na Anglịkan.
Ofụri Esịt dakọtara na Android 2.1 na mgbe e mesịrị.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye TunesGo (Mac)
Na-amalite, wụnye ngwá ọrụ a na gị Mac. Wepụ a eriri USB jikọọ gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka Mac. Na-agba ọsọ ngwá ọrụ a. Mgbe ahụ, Mac ga-echetara gị na-agba ọsọ iTunes. Agba ya na mgbe ahụ Wondershare TunesGo ga-emere n'akụkụ aka nri nke iTunes, emi odude dị ka ihe tinye-na na.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta Music, Video, Photos na Documents si Mac ka Android
Na gị Mac, na-emeghe Finder na ịnyagharịa ka nchekwa ebe music, video, foto na dọkụmentị na-azọpụta. Na isi window nke TunesGo, pịa Dọrọ & dobe taabụ. Mgbe ahụ, ikpuru na dobe gị chọrọ faịlụ site na Mac ka n'ebe ahụ.
Nzọụkwụ 3. mmekọrịta iTunes Library na Android on Mac
Pịa mmekọrịta taabụ ma nne Mmetụta mmekọrịta Android ka iTunes ma ọ bụ mmekọrịta iTunes ka Android dị ka gị mkpa. Mgbe ahụ, pịa mmekọrịta button na-amalite syncing usoro.
Cheta na: Wondershare TunesGo bụ dakọtara na ma Windows na Mac.For Windows ọrụ, ị nwekwara ike mmekọrịta Android na PC.
Mgbe ụfọdụ, i nwere ike na-achọghị ka mmekọrịta ihe niile n'etiti Android na Mac. Kama, ị dị nnọọ chọrọ nyefee otu ụdị nke faịlụ, dị ka foto ma ọ bụ listi ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị na-ilekọta banyere, ị nwere ike na-agbalị ụzọ n'okpuru.
Contracts emi odude ke Android ekwentị nwere ike synced na Mac site na iji Mac Address Book. Iji na-eme na ị ga-gakọrịta kọntaktị gị na gị Google akaụntụ na mbụ. Ọ bụrụ na ị na-enweghị Google akaụntụ, ị nwere ike iwunye Gmail ngwa gị Android ekwentị na ịmepụta otu akaụntụ maka ya. Mgbe ahụ, na-eso mfe nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Open Ndi ana-akpo na gị Android ekwentị. Na mgbe ahụ enweta mebere button ekpe ka n'ụlọ button na-egosi menu na ihuenyo.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ jikota akaụntụ> Marge na Google. Ọ ga-ajụ maka gị nkwenye. Dị pịa ok na kọntaktị gị ga-synchronized na gị Google akaụntụ.
Nzọụkwụ 3. y'otú Address Book na gị Mac na mgbe ahụ gaa Mmasị wee pịa na Accounts ebe ị ga-On m Mac na ị ga-ahụ nhọrọ dị ka foto dị n'okpuru ebe.
Nzọụkwụ 4. On ndepụta họrọ gakọrịta Google dị ka e gosiri na foto a n'elu. Wee pịa na Nabata na igbe nke mmapụta. Mgbe ahụ ị ga-jụrụ ịbanye gị Gmail akaụntụ na paswọọdụ nke ị ga-eme ya.
Mgbe ị na mezue nzọụkwụ ndị a nke ọma ị ga-ahụ na ihuenyo n'okpuru. Pịa na mmekọrịta Ugbu a na ihe niile kọntaktị gị ga-abụ dị na gị Mac Address Book.
E wezụga Wondershare TunesGo (Mac), doubleTwist na-enyere gị ka mmekọrịta music na video na gị Android ekwentị na Mac. The nkuzi n'okpuru-eduzi gị otú e si eme ya.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye doubleTwist na gị Android ekwentị.
Nzọụkwụ 2. Wụnye desktọọpụ doubleTwist na gị Mac.
Nzọụkwụ 3. Run desktọọpụ doubleTwist on Mac na jikọọ na gị Android ekwentị Mac site na iji eriri USB.
Nzọụkwụ 4. Pịa na Disk Drive na gị Android ngwaọrụ ga-jikọọ na Mac na doubleTwist ga-enwe ike mmekọrịta music / video gị Android ekwentị na Mac.
Cheta na: N'ihi na ụfọdụ ngwaọrụ, ị nwere ike ọ gaghị na-ahụ Disk Drive ma ị ga-ahụ na-edo Mas Nchekwa nke ị ga-họrọ.
Nzọụkwụ 5. Ugbu a na gị Mac ị ga-ahụ a na ihuenyo apostle gị ikike dị ka oyiyi n'okpuru. Kaa igbe dị ka e gosiri na oyiyi wee pịa mmekọrịta bọtịnụ. Nke a ga-mmekọrịta ma na-music na gị Android ekwentị site Mac. Ọ bụrụ na ị họrọ Import ọhụrụ music si ngwaọrụ nhọrọ nakwa, mgbe ahụ, mmekọrịta ga-na ma ntụziaka.
Dị nnọọ ka a ma ọ bụrụ na ị họrọ Videos n'elu nke oyiyi na n'akụkụ aka nri ma na-eme otu ihe ahụ, mgbe ahụ, videos ga-synchronized gị Android ekwentị.
Ọ bụrụ na ị synced kalenda na Google akaụntụ na ugbu a wnat ka ka mmekọrịta ndị a kalenda na Mac, ị nwere ike ise nkwado si iCal ngwa.
Nzọụkwụ 1. Mepee iCal ngwa na gị Mac. A window ga-apụta dị ka oyiyi n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. Dị ka ị na-ahụ na ihe oyiyi ahụ, Site Accounts pịa Tinye na otu akaụntụ ma na igbe dị n'okpuru ebe on Akaụntụ Ụdị họrọ Akpaaka.
Nzọụkwụ 3. Mgbe ahụ on Email Address igbe Pịnye gị Gmail adreesị akaụntụ na Paswọdu ngalaba tinye gmail paswọọdụ.
Nzọụkwụ 4. Mgbe ahụ, pịa on Mepụta na iCal ga mmekọrịta gị Android / google kalenda-akpaghị aka. Nke a bụ otú ị pụrụ mekọrịta gị Android kalenda gị Mac.
2.4. Mmekọrịta Android Photos na Mac site Iji Dropbox
Mmekọrịta foto site na Android ka Mac na site na Mac ka Android dị mfe taa n'ihi na nke ojii nchekwa na enye ọrụ. Ebe a, anyị ga-eji Dropbox ka ojii nchekwa eweta ọrụ. Cheta na, Dropbox eji Air-mmekọrịta usoro, otú ị ga-enwe a na-arụ ọrụ njikọ Ịntanetị na gị Mac nakwa akporo ekwentị. Ị adịghị mkpa data USB maka mmekọrịta site na iji Dropbox.
Nzọụkwụ 1. Gaa Dropbox offcial website na debanye maka Dropbox akaụntụ. I nwekwara ike ibudata na wụnye desktọọpụ Dropbox ngwa.
Nzọụkwụ 2. Gaa Google Play na ibudata Dropbox na gị Android ekwentị na abanye n'ime ya.
Nzọụkwụ 3. Iji mmekọrịta Android foto Mac, i nwere ike imeghe Gallery ma họrọ a nchekwa, dị ka Igwefoto. Emeghe ya na ego gị chọrọ photos na enweta na òkè akara ngosi.
Nzọụkwụ 4. Kpatụ Tinye ka Dropbox bọtịnụ na foto gị ga-atụkwasịkwara Dropbox ígwé ojii nkesa. Mgbe ahụ, na-agba ọsọ Dropbox appliacaiton na gị Mac ma ọ bụ na-emeghe Dropbox website ibudata Android foto Mac.
Nzọụkwụ 5.In N'otu ụzọ ahụ, ka mmekọrịta foto site na Mac ka Android, ị dị nnọọ na-agba ọsọ Dropbox ngwa na Mac ma ọ bụ na-emeghe Dropbox website na bulite foto site na Mac ka Dropbox ígwé ojii nkesa. Mgbe ahụ photos ga-enweta na gị Android ekwentị site Dropbox ngwa.
2.5. Mmekọrịta Android Documents na Mac site Iji Android File Nyefee
Syncing akwụkwọ nke onye Android ekwentị na Mac dị mfe na Ebe E Si Nweta-aga ojii nchekwa ọzọ. Ị nwere ike mfe ime ya iji Dropbox, Android File Nyefee, wdg Lee, anyị na-Android File Nyefee dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 1. Get Android File Nyefee arụnyere na gị na Mac. Jiri gị Android ekwentị eriri USB jikọọ gị Android ekwentị Mac.
Nzọụkwụ 2. Open Android File Nyefee na gị Mac. Ọ bụrụ na gị Android ekwentị ọma ghọtara, SD kaadị gị Android ekwentị ga-gosiri na Mac desktọọpụ.
Nzọụkwụ 3. Dị nnọọ idetuo faịlụ gị mkpa gị Android ekwentị ndekọ gị Mac. Ma ọ bụ ị pụrụ iṅomi faịlụ site na gị Mac gị Android otú a dị ka nke ọma.
2.6. Mmekọrịta Android Ibe edokwubara na Mac site Iji Google Akaụntụ
Ibe edokwubara gị Android ekwentị ịgwa gị search àgwà. Mmekọrịta ibe edokọbara n'etiti Android ekwentị na Mac enye mfe ohere ka ibe edokọbara mgbe ọ bụla ị na-eji Android ekwentị ma ọ bụ Mac. Iji otú ibe edokọbara mmekọrịta, ị pụrụ iji Google Chrome. Soro mfe nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. wụnye Chrome na gị Android ekwentị. N'otu oge ahụ, ị kwesịrị ị wụnye Chrome on Mac.
Nzọụkwụ 2. Sign gị Google akaụntụ chrome nchọgharị gị Android ekwentị na Mac site na ịme ọpịpị ma ọ bụ ịpị Ntọala> Banye.
Nzọụkwụ 3. Ugbu a Pịa na Tinye Akaụntụ na e i kwesịrị itinye gị google mail adreesị na paswọọdụ ma si otú ị ga-aka gị google akaụntụ na gị chrome nchọgharị.
Nzọụkwụ 4. Ugbu a banye na gị chrome nchọgharị na Mac nakwa esonụ otu usoro.
Nzọụkwụ 5. Ugbu a ay ọhụrụ ibe edokọbara ị gbakwunye na ihe nchọgharị gị ga-synced n'etiti Mac na Android ekwentị na-akpaghị aka.
A Ike Android File Nyefee Alternative
Mmekọrịta Android na iTunes na ala
Nyefee iTunes Music ka Nexus 5/4/7
Olee otú mbupụ Outlook Ndi ana-akpo ka Gmail
> Resource> Android> mmekọrịta Ihe niile na android ekwentị na Mac